ဘန်ကောက်ခရီးသွားချစ်သူ, 128/20 Silom, Soi-6, Silom Rd, Bangrak,, Lamphun (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Lamphun > สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว > ဘန်ကောက်ခရီးသွားချစ်သူ
1055/786 State Tower, 35th Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok
1055/525 ชั้น 28 อาคารสเตททาวเวอร์ โรงแรมเลอบัว แขวงสีลม เขตบางรัก, Bangkok
Thaiphum Skylight 191/2 Soi Suksavidhya, Sathorn Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok
35/F Jewelry Trade Center, 919/375 Silom Road, Bangkok
33/47 Wall Street Tower 11th Floor, Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok
119 BIS Building, 4th Floor, Mahesak Road, Suriyawong, Bangkok
Bangkok Bike Tours, Bangkok
69/2 Charoen Krung Soi 44, Bangkok
25th Floor, Chartered Square Building, 152 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok
152 Chartered Square Building, 30th Fl., Room 30-01, Unit 3013, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok
Silom soi 15, Bangkok
Charoen Krung 46 Road, Bangkok
Level 22/221, Thai CC Tower, 43 South Sathon Road, Yan Nawa, Sathon, Bangkok
15 Chareonkrung 45 chareonkrung Road, Bangkok
140/13 อาคาร ITF tower ชั้น 11 บริษัท AVS Express Co., Ltd., Bangkok
1041/3-4 Siri Square Silom (Opposite Novotel Hotel), Between Soi Silom 21 and 23, Bangrak, Bangkok
320 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok
1055 State Tower, Silom Road, Bangrak, Bangkok
1055, State Tower, Silom Road, Bangkok
981 Silom Rd, Bangkok, Bangkok
1249/4 Gems Tower Charoenkrung Rd, Bangrak, Bangkok, Bangkok
235,237,239 Sathorn Tai Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ชั้น 8 ห้อง 804 ซอยวัดสวนพลู แขวงบางรัก เขตบางรัก ก, Bangkok
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แ, Bang Rak
190 ถนนสีลม, Bangkok
Beyond Wealth Solution
919/614 Jewelry Trade Center, Silom Rd., Bangkok
State Tower, Silom Road, Bangkok
849 ถนน สีลม, Bangkok
55/3 Soi Pipat2, Silom Road, Bangrak District, Bangkok
80 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก, Bangkok
35 SVL House Bldg, Surasak Rd, Bang Rak, Bangkok
43/3 Silom 19 Rd., Bangrak, Bangkok, Thailand 10500, Bangkok
4,6 Charoenkrung Soi 36, Charoenkrung Rd., Bangrak, Bangkok
Bangkok Gem & Jewelry Tower, 19th Floor 322/41,42,44 Surawong Road Bangrak, Bangkok
ฟิตเนสFitness Equipment Thailand
88/62 sathorn yannawa, Bangkok
Decho road, Silom, Bangkok
รับตกแต่งบ้าน ออกแบบ ก่อสร้า
707 Vue Building, 3rd Floor, Room T3, Khlong Ton Sai, Khlongsan, Bangkok, Thailand, Bangkok
Candide Books (ร้านหนังสือก็องดิด)
Candide Books ก็องดิด 41/4 The Jam Factory Charoen Nakhon Road Khlong San, Bangkok
98 North Sathon Road, Amphoe Bang Rak
22 ซอยเจริญนคร 14, Khlong San
1035/3 Soi Silom 21 Sunsquare Silom, Silom, Bangrak, Bangkok
Mahaesak Road Soi 1, Bangkok
919/1 Silom Road, Bangkok
Bangkok Fashion Outlet, Bangkok
KitchenAid Thailand Retail
919/555 No2-3, 12 th FL., SOUTH TOWER BLDG., SILOM RD. SILOM, BANGRAK, Bangkok
ถ.นเรศ ใกล้ๆสน.บางรัก, Bangkok
NAN MEE Co., Ltd. Building 146 North Sathorn Rd., Silome, Bangrak, Bangkok
อาคาร บีไอเอส (B I S BUILDING) 119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500, Bangkok
Central Silom Tower, 306 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok
30/1 Soi Charoen Krung 38, Charoen Krung, Bangrak, Bangkok
Alfresco 64 - A Chivas Bar, 64th Floor, State Tower Bangkok, 1055 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok
467 Siwiang Rd. Bangrak Silom, Bangkok
Sathorn 10 Road, Silom, Bangkok
Silom 19, Bangkok
905 Silom 19 Alley, Silom, Bang Rak, Bangkok
Next to Shangri La hotel on the Chao Phraya, Bangkok
1481 ถนนเจริญกรุง สีลม บางรัก (ตรงข้ามโรบินสันบางรัก), Bangkok
1495 Charoenkrung Rd., Silom Bangrak, Bangkok
CAT Tower, Bangkok
252/8 Silom Road (between Silom Soi 18-20), Bangkok
19 Captain Bush Ln Chareon Krung 30, Bangkok
149, Sathorn Soi 12 Alley, Silom, Bang Rak, Bangkok
142/21 Sathon Soi 12, Silom, Bang Rak, Bangkok
124 Satorn 12, Bangkok
ဘန်ကောက်ကို အလည်လာဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ +66824693437 ဘန်ကောက်ခရီးသွားချစ်သူ Page သည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ အထင်ကရ နာမည်ကြီး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများသို့ လွယ်ကူစွာသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသော ဈေးအသက်သာဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော Page ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အလည်အပတ်သွားလိုသူအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်သည်နေသည်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံမှ လာရောက်လည်ပတ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုလဲ မိသာစုသဖွယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ အလည်အပတ်သွားလိုသူမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အလည်အပတ်သွားခြင်း၊ ဘုရားဖူးခြင်း၊ shopping ထွက်ခြင်း၊ အပန်းဖြေ ဥယျာဉ် ၊ ပန်းခြံသို့ အပန်းဖြေလိုခြင်း၊ များရှိပါက ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ထိုင်းဖုန်း 08 2469 2324 ( Viber +66824693437 ) သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Line: ID: vichanasiatravel
#ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် ကုန်းမကျန်၊ရေမကျန်၊ နေပူမိုးရွာ မရှောင် စစ်ဆေးမှု ဖမ်းစီးမ
#ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် ကုန်းမကျန်၊ရေမကျန်၊ နေပူမိုးရွာ မရှောင် စစ်ဆေးမှု ဖမ်းစီးမ #ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် ကုန်းမကျန်၊ရေမကျန်၊ နေပူမိုးရွာ မရှောင် စစ်ဆေးမှု ဖမ်းစီးမှုတွေအဆက်မပြတ်တွေ့...
အရေးမကြီးရင်အိမ်မပြန်ကြပါနဲ့၊ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်း၊ဘန်ကောက်သံရုံးပတ်စပို့လ သတင်းခေါင်းစဉ်1.အရေးမကြီးရင်အိမ်မပြန်ကြပါနဲ့2.ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်3း.ဘန်ကောက်သံရုံး ပတ်စပို့လုပ.....
ခမျြးသာတဲ့သူထကျ ဆငျးရဲတဲ့သူကဘာလို့ပိုမြားနရေတာလဲ - Myanmar Star Channel
ခမျြးသာတဲ့သူထကျ ဆငျးရဲတဲ့သူကဘာလို့ပိုမြားနရေတာလဲ - Myanmar Star Channel အောငျမွငျမှုဆိုတာကကိုယျ့ဆီသို့ ဝငျရောကျလာဖို့အတှကျ ခကျခဲပမေယျ့ ထှကျသှားဖို့ကတြော့ အရမျးကို လှယျကူလှပါတယ....
မွနျမာအစားအစာတှေ မစားရတာကွာလို့ လှမျးနရေငျ လာမယျ့ ဧပွီလ ၁၃ ရကျ​ အင်ျဂါနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ မွနျမာ့အစားအစာ စားပှဲ​တျောကိုလာခဲ့လိုကျပါ။ မွနျမာ့နှဈသဈအားလပျရကျမှာ လုံးဝလကျမလှတျသငျ့တဲ့ ပှဲလေးပါပဲ💛😇
ကြှနျတျောတို့ တဈနကေုနျ တဈဝကွီးတူတူစားကွမယျလနေျော 🤤🤤🍜🍲🌽🍚
🚨အရေးကွီးဆုံးကတော့ ဒီပှဲလေးက မွနျမာပွညျကွီး အတှကျရနျပုံငှရှော ပေးတဲ့ပှဲလေးပါ။ ရသမြှ အမွတျတှပွေနျလှူသှားမှာပါ🇲🇲❤️
အားလုံးပဲ အတူတှကွေ့မယျနျော 🇲🇲❤️🇲🇲
ဒီပှဲမှာ မွနျမာ့​နှဥေီး ပှဲ​တျောရဲ့ တံဆိပျနဲ့ အင်ျကြီတှေ၊ ပှဲလကျမှတျ​တှလေညျး ​​ရောငျးခြ​ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
🇲🇲Do you miss having Burmese Foods?🇲🇲🤔
Come join Myanmar Food Fest happening on coming Tuesday, 13 April‼️Myanmar New Year holiday that you should never missed out💛😇
Enjoy all your favs for all day long🤤🤤🍜🍲🌽🍚
🚨IMPORTANTLY, all the profits will go into the donation for Myanmar🇲🇲❤️
📍Location is attached withalink📍
See you everyone 🇲🇲❤️🇲🇲
Myanmar food festival is organized by Myanmar Students in Thailand and all international students are welcomed to taste the food of Myanmar.
You will be givenachance to buy T-shirt with the logo of Myanma Spring, culture and art concert and also tickets for that concert too.
Location LRR-Lamina Rosa Restaurant
7/1/2021 မဲဆောက်မြဝတီတံတားမပိတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ပြန်လို့မရ သေးဘူး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့တော့ပြန်လို
မြန်မာယူကျု့ချိန်နယ်ကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုအောက်ကhttps://www.youtube.com/c/MyanmarYouTubeChannel?sub_confirmation=1 အရင်နှိပ့်ပြီး SUBSCR...
wave money နှင့်လွှဲလျင်(1)
wave money နှငျ့လှဲလငျြ(1)
lottery.kapook.com รายงานผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ อัปเดตรวดเร็วทุกรางวัล ที่ Kapook Lottery
ထိုင်းမှာ #coronavirus ကူးစက်ခံရသူ ၃ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပြန်ပါတယ်...
၃ ဦးလုံးမှာ မိသားစုတခုထဲမှဖြစ်ပြီး အသက် 65 နှစ်အရွယ် ဂျပန်မှပြန်လာသူအမျိုးသားကြီး ၊ သူ၏ သားဖြစ်သူနှင့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်...
စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၁၈ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသီးသန့် ကုသမှုခံယူနေရပြီး ... နောက်ဆုံးတွေ့ရှိသူဖြစ်တဲ့ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားရဲ့ အတန်းဖေါ် အယောက် ၅၀ ကိုလဲ စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်
👧 လေဆိပ်မသွားတတ်ဘူးအကို 😌
👉 မော်ချစ်ပန်းခြံ (သို့) အနုဆာဝရီ ဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို သွားတတ်ရင် အရမ်းလွယ်သွားပါပြီ။ 🥰
🚏 အနုဆာဝရီကနေဆို A2 ကားဆက်စီးပါ။
🚏 မော်ချစ်ကနေဆို A1 (သို့မဟုတ်) A2 ဆက်စီးပါ။
🏙️ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အချက်အချာကြတဲ့နေရာ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ (((🚏 မော်ချစ်ပန်းခြံ နဲ့ 🚏 အနုဆာဝရီကျောက်တိုင်))) ဒီနေရာနှစ်ခုထဲက တစ်နေရာကို လာတတ်တယ်ဆိုရင် ဒွန်မောင်းလေဆိပ်အသွားခရီးအတွက် စိတ်အေးလိုက်ပါတော့ မိတ်ဆွေ။
💰 ၃၀ ဘတ် ပေးရမည်။
😍 စိတ်မပူနဲ့ဗျားးးး .. ဂိတ်ဆုံးထိသာစီးလိုက် လူတွေအားလုံးဆင်းမှ ဆင်းလိုက်ပါ။
🚍 ဒီလိုင်းကား၂ခုလုံးက လေဆိပ်လိုင်းကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒွန်မောင်းလေဆိပ် အဆောက်အဦး ၁ ရဲ့ ၃ လွှာ မှာ ဂိတ်ဆုံးပါတယ်။ ရန်ကုန် နဲ့ မန်းတလေး သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီမှာပဲ တည့်တည့်ပဲ တံခါးပေါက်ထဲဝင်လိုက်ပါ။
ထိုင်းပြည်တွင်းခရီးသွားမယ့်သူတွေဆို အဆောက်အဦး ၂ ကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါ။ နီးနီးလေးပါပဲနော်။ ဥပမာ - မဲဆောက်၊ ချင်းမိုင်း၊ ဖူးခတ် စတဲ့မြို့တွေကို သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။
🏙️ ဒီနေရာ နှစ်နေရာကို ရောက်ဖို့အတွက်က ဘန်ကောက်မြို့အနှံ့ကနေ လိုင်းကား၊ မိုးပျံရထား၊ မြေအောက်ရထား၊ လွတ်တူ့ကား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
🏙️ ဘန်ကောက်မြို့အတွင်းတင်မကပါဘူး ဘန်ကောက်မြို့ပြင်က ဆမွတ်ပရာကန်၊ ဆမွတ်ဆာခွန်(မဟာချိုင်)၊ နခွန်ပထုမ်၊ လယ်ယောင်၊ ချွန်ပူရီ၊ စတဲ့ခရိုင်တွေကနေလည်း လွတ်တူ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ အနုဆာဝရီဖြစ်ဖြစ်၊ မော်ချစ်ပန်းခြံဖြစ်ဖြစ် ရောက်တဲ့ လွတ်တူ့ကားကို စီးလိုက်ရုံပါပဲ။
😍 ပြီးရင် အပေါ်မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း လိုင်းကားဆက်စီးလိုက်ရုံပဲပေါ့။
✔️ လေယာဉ်ထွက်ချိန်မတိုင်မီ ၁ နာရီအလို ကောင်တာလုံးဝပိတ်သည်။ ပိတ်သွားရင် ကယ်လို့မရပါ။ လက်မှတ်အဆုံးခံရုံပဲ။
✔️ ဒါကြောင့် လေယာဉ်ထွက်ချိန်ထက် အနည်းဆုံး ၂ နာရီ စော၍ Check-in(စာရင်းသွင်း) ကောင်တာ သို့ ရောက်နေရမည်။
✔️ လမ်းခရီး ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။ ကား/ရထားစောင့်ချိန်၊ ကားလမ်းပိတ်ချိန် နှင့် လမ်းမှားနိုင်တဲ့အချိန် တို့ကို ကြိုတင်ထည့်တွက်ပါ။
✔️ လေဆိပ်မှားပြီး မသွားမိစေနှင့်။
Credit . Originally Uploader
#ထိုင်း #ထိုင်းရောက် #လေယာဉ်လက်မှတ် #ထိုင်းရောက်မြန်မာ
CI နှင့် PJ ပါတ်စပို့များ သက်တမ်းတိုးရန် အဆင့် (1)
When u feel sad, travel...
When u feel happy, travel...
When u are lonely, travel...
even though u feel nothing, just travel...
Online ပျေါမှာ Single လို့ တငျ
ကလေး အဖအေမတှေလေညျး ( မာပါစေ )
မမမဲလုံးတို့လညျး ( မာပါစေ )
Fb ဖှငျ့လငျြ Chatbox ဝငျ
ကိုဖှနျကွောငျတို့လညျး ( မာပါစေ )
အပွငျမထှကျ Online တကျ
ခရဇေီတှလေညျး ( မာပါစေ )
ဟိဟိ ခိချ မပွတျသုံး
၄၀ ကြျောရောငျးမရ သုံးစား မရတဲ့
အပြိုကွီး လူပြိုကွီးတှလေညျး ( မာပါစေ )
မွငျသမြှ Like တှသေ့မြှ Like
Online ပွညျသူတှလေညျး ( မာပါစေ )
နိူငျငံရေး Acc တှလေညျး ( မာပါစေ )
ဟိုဖာ ဒီဖာ အကုနျဖာတဲ့
ပွညျထဲရေး က ဖာသညျ
ကွီးတှလေညျး ( မာပါစေ )
Rs တပျလိုကျ ခုဖွုတျလိုကျ
Single တခုလပျတှလေညျး ( မာပါစေ )
စလယျဘယျတီတှလေညျး ( မာပါစေ )
အိုမမတို့လညျး ( မာပါစေ )
ကနျြးခမျးသာလို့ ( မာပါစေ )
ဖဘေု့တျရောဂါသညျတှလေညျး ( မာပါစေ )
ဟိုစောငျး ဒီစောငျး အကုနျစောငျး
စတေးတပျစောငျးသူတှလေညျး ( မာပါစေ )
ဟိုဖှ ဒီဖှ အကုနျဖှ
အူးဖှတို့လညျး ( မာပါစေ )
မှမှ အာဘှား မပွတျတငျ
ရီလေးရှငျးတှလေညျး ( မာပါစေ )
ဟိုဒှနျ့ ဒီဒှနျ့ မမဒှနျ့လညျး
New year မှာ ( ဒှနျ့နိုငျပါစေ )
မူးသူမြားလညျး ( မာပါစေ )
ဖဘေု့တျပျေါကို ဓာတျပုံရောကျတဲ့ မမတှလေညျး
( မာပါစေ )
ရဲစခနျး မှာ အရဈခံသူမြားလညျး ( မာပါစေ )
ဆေးရုံရောကျသူမြားလညျး ( မာပါစေ )
လကုနျ ရကျနီး ဘိုငျကပွတျ
ဘူနသေူမြားလညျး ( မာပါစေ )
...... 🙂 🙂 🙂 ......
128/20 Silom, Soi-6, Silom Rd, Bangrak,
Lamphun สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ไทลื้อ) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
238 M.6 T.Huiyap A.Banthi
Green Sustainable Local
The Sun New Center
209 ม.5 บ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
สวนน้ำ สวนสนุก ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
MC ปากหวาน Classlc Lamphun
ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
บ้านสวนระเบียงนา : Rabeangna Garden Home
เรียนรู้วิถีชนบทตามแบบฉบับคน ลำพูน สุขใจไปกับคุณแม่พยาบาลวัยเกษียณหัวใจร่วมสมัย
หมวกไม้สาน รับส่งทุกที่ สวยๆ
ขายหมวกไม้ไผ่สาน สนใจติดต่อได้ 0861805223
324 หมู่4ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน
ชีวิตชาวสวน ชาวไร่ บ.สันนา อ.ป่าซาง
บ้านสวนสุรีย์ Ban Suan Suree
บ้านพักรายวัน-เดือน -ปี.. อากาศดี สงบ..เหมือนพักบ้านท่านเอง